Kitra – «Ligue des champions d’Europe»: nofaizin’i Cristiano Ronaldo ny Atletico de Madrid | NewsMada
Kitra – «Ligue des champions d’Europe»: nofaizin’i Cristiano Ronaldo ny Atletico de Madrid
Noporofoin’i Cristiano Ronaldo teo imason’izao tontolo izao fa mbola izy aloha hatreto no andrarezin’ny baolina kitra. Nohamarininy tamin’ny fandreseny ny Atletico de Madrid izany ka namonoany baolina telo.
Vitan’i Cristiano Ronaldo ny namadika ny nofy ratsin’ny Italianina ho tonga nofy tsara sy mahafinaritra. Tanteraka izany, tamin’ny nampakarany ny Juventus de Turin, ho any amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”. Resin’ny Italianina, tamin’ny isa mazava 3 no ho 0, mantsy ny Madrilènes, teo amin’ny lalao ampahavalon-dalana miverina. Fihaonana, notanterahina tao Turin, ny talata alina teo.
Nahavita “remontada” indray ny Juventus, tamin’ity, rehefa niondrika tamin’ny isa 2 no ho 0, nandritra ny lalao mandroso.
Niady ny fihaonana teo amin’ny roa tonta, saingy tao amin’ny Italianina ny vintana, tamin’ity. Vao nanomboka 4 mn monja ny lalao, efa nahafaty baolina ny Juve, tamin’ny alalan’i Chiellini, saingy nolavin’ny mpitsara izany satria nandona ny mpiandry tsatoby ny tongotr’i Ronaldo. Tsy nahakivy azy ireo izany fa nanokatra ny isa ry zareo, taorian’ny tolotra azon’i CR7, avy any amin’i Bernardeschi, izay nodominy tamin’ny lohany.
Nentin’ny roa tonta niala sasatra io isa tokana, 1 no ho 0, io.
I Ronaldo ihany, i Ronaldo hatrany
Nampitombo ny isa ho azy ny Italianina, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Vao nanomboka telo minitra monja mantsy ny lalao, mbola nampiditra baolina tamin’ny lohany indray i Ronaldo, taorian’ny langalanga nalefan’i Cancelo. Velombolo tanteraka ireo mpijery Italianina 41 000. Nihevitra ny rehetra fa hiditra any amin’ny fanalavam-potoana. Tsy izany anefa no nitranga fa nahazo “penalty” ny Italianina, teo amin’ny minitra faha-84, rehefa voafingan’i Correa, tao anaty faritra tsy azo ivalozana, i Bernardeschi. Tafiditr’i CR7 tsara io baolina fahatelo io.
Baolina faha-124 tafiditr’i Cristiano Ronaldo, tao anatin’ny “Ligue des champions” io. Tsiahivina fa imbalo i Ronaldo no nahafaty baolina telo, nanao “triplé”, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa.
Teo amin’ny fihaonana iray, nomontsanin’ny Manchester City, tamin’ny isa mavesatra, 7 no ho 0, ny Schalke 04. Hanampy ny FC Porto, ny Tottenham, ny Ajax Amsterdam, ny Manchester United, izany ny Manchester City sy ny Juventus de Turin.